Daawo:Horjooge sare oo Shabab ah iyo darwalkiisi oo iso sii dhiibay – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-55163 single-format-standard">
Home / Wararka Maanta / Daawo:Horjooge sare oo Shabab ah iyo darwalkiisi oo iso sii dhiibay
Daawo:Horjooge sare oo Shabab ah iyo darwalkiisi oo iso sii dhiibay
Ibraahim Maxamed Bitow, oo ahaa horjoogihii maleeshiyada Alshabaab ee Gobolka Shabeellada Hoose, ayaa sheegay in uu go’aansaday in uu ka soo tago Alshabaab, ka dib markii uu garowaday inay gaar marsan yihiin Xaqa iyo Islaamnimada ayna xasuuqayaan shacabka Soomaaliyeed.
Bitow ayaa sheegay in dagaallo badan oo ay isagau hor yimaadeen Ciidanka xoogga dalka, ay kooxdu kala kulantay jab aad u xooggan, taas oo keentay in ay u adkeysan waayaan dagaalka oo ay kaymaha ku dhuumaaleystaan.
“Waxaan hoggaaminayay maleeshiyaad tiraradoodku ka badan tahay 100, oo dagaallo badan la galay ciidanka Dowladda, waxaana naloo geystay jab aad u xooggan” ayuu yiri Ibraahim Maxamed Bittow, horjoogihii maleeshiyada Alshabaab ee gobolka Shabellada Hoose.
Bitow oo sheegay in uu ka tirsanaa Alshabaab 9-kii sano ee la soo dhaafay ayaa tilmaamay in kooxdu sii liiceyso, ayna la kulmeyso guul darrooyin is daba joog ah.Horjoogahan ka soo goostay Alshabaab, ayaa dowladda Soomaaliyeed uga mahad celiyay soo dhoweynta wanaagsan, waxa uuna ugu baaqay dhallinyarada u dagaallanta kooxda Shabaab in ay ka soo tagaan maleeshiyadan oo uu sheegay in ay baal marsan tahay Islaamnimada.
Bitow ayaa cafis weydiistay Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed, waxa uuna codsaday in lagu garab siiyo sidii uu qeyb uga noqon lahaa la dagaallanka Alshabaab oo uu tilmaamay in ay yihiin cadow naxariis daran.
“Waxaan dowladda ka codsanayaa in ay ii kaashato la dagaallanka Alshabaab, oo aan si fiican u isu naqaan, si dhibkooda ummadda looga dulqaado” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ibraahim Maxamed oo ahaa horjoogihii maleeshiyaadka kooxda Alshabaab ee gobolka Shabeellada Hoose.
Dhinaca kale Aadan Geeddi oo loo yaqaanno Aadan Dheere oo ahaa darawalka Ibraahim Bitow, ayaa sheegay in Alshabaab ay duufsadeen isagoo 11 jir ah, ayna ka faa’iideysteen carruurnimadiisa.
Aadan ayaa sheegay in hadda oo garaadkiisu ku filnaaday ay u cuntami weysay in uu ka sii mid ahaado kooxdan oo uu sheegay in ay dhib badan ku hayso shacabka, ayna diinta ka saareyso ciddii aan iyada la dhacsaneyn.
Ibraaahim Maxamed iyo Aadan Dheere, ayaa tilmaamay in ay jiraan boqollaal maleeshiyada Alshabaab ah oo ay ka go’an tahay in ay isaga soo tagaan kooxdan argagixisada, waxa ayna dowladda ugu baaqeen in ay dhallinyaradaas ku caawiso sidii ay isu soo dhiibi lahaayeen.
← Previous Story Xukuumada Somaliland ayaa ka Hadashay in Wafti ka Socdaa ay Booqdeen Israaiil iyo Inkale
Next Story → Daawo:Golaha wasiirada Somaliya oo shir deg dega yeeshay iyo Shabaab oo lasoo afjarayo